जंगे पिल्लर हराएपछि नेपाली भूमि गुम्ने खतरा | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति १८ फाल्गुन २०७५, शनिबार २१:०० लेखक नेपाली जनता
कैलाली । धनगढी उपमहानगरपालिका–१८ फूलबारी ए गाउँमा वषौंदेखि नेपाली नागरिकले भोगचलन गर्दै आएको ५० बिघाभन्दा बढी भूमि भारतमा पर्ने गरी सीमा स्तम्भ निर्माणको तयारी भइरहेको छ। ७४२ नम्बरको जंगेपिल्लर नभेटिएपछि नेपाली भूमि मिच्ने गरी नयाँ सीमा स्तम्भ निर्माणको तयारी भइरहेको हो।
‘दुई तीन सय मिटरभित्र परेको छ,’ वडा नम्बर १८ का अध्यक्ष मुराहारी अधिकारी भने, ‘यहाँ पिल्लर छ भन्ने त हामीलाई पनि अनुमान त छ। यो ठाउँ त हुँदै होइन। यसरी त भूमि मिचिनु भएन नि।’ ७४२ नम्बरको जंगे पिल्लर नभेटिएपछि नेपालीले संरक्षण गरिरहेको श्रीकृष्ण सामुदायिक वनको बीच भागमा पर्ने गरी नयाँ पिल्लर निर्माणको तयारी भइरहेको छ। सीमा सर्भे टोलीको लापरबाहीले ५० बिघाभन्दा बढी नेपाली भूमि गुम्ने अवस्था आएको सामुदायिक वनका अध्यक्ष मानबहादुर थापा मगरले बताए। ‘१० वर्षअघि हामीले वन लगाएका हौँ,’ अध्यक्ष थापाले आक्रोस पोखे, ‘त्यो बेला हाम्रो भूमि भनेर लगाएको वन अहिले कसरी भारतीय भूमिमा पर्न सक्छ? नेपाली पक्षको लाचारीले हाम्रो भूमि गुम्दैछ।’ सीमा पिल्लर नभएको फाइदा भारतीय पक्षले उठाइरहेको उनको दाबी छ।
‘जिपिएसले यहाँ हो भन्छ भन्छन् उनीहरू,’ उनले भने, ‘जिपिएस पनि उनीहरुले नै त बनाएको हो।’ वर्षौंदेखि नेपाली नागरिकले भोगचलन गरिरहेको क्षेत्र भारतीय भूमिमा पर्ने गरी सीमास्तम्भ निमार्णको तयारी भएपछि त्यस क्षेत्रका स्थानीय विरोधमा उत्रिएका छन्। ‘अहिले पनि नदीले धार फेरेर हाम्रो धेरै भूमि भारतमा गएको छ। फेरि पनि अझै सीमा सार्ने कुरा हुँदैछ,’ २०३६ सालदेखि यस क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका डिल्लीराज सापकोटा भने, ‘हामी यसका सहमत छैनौं। पहिलेको जंगेपिल्लर खोजिनु पर्छ।’ करिब १२ वर्षअघिसम्म यस क्षेत्रमा जंगे पिल्लर देखेको उनको भनाइ छ। सर्भे टोलीले देखाएको स्थान गलत भएको सापकोटाको दाबी छ।
अहिले सीमास्तम्भ राख्न लागिएको ठाउँभन्दा पहिलेको सीमास्तम्भ भएको ठाउँ १०० मिटर भारततर्फ पर्ने सापकोटाले बताए। कैलालीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज भट्टले हराएको जंगे पिल्लर खोजिने र केन्द्रबाट प्राविधिकको टोली ल्याएर सीमा समस्या हल गर्ने बताउँछन्। ‘सीमा सर्भे टोलीले तोकेको स्थानमा स्थानीयले विरोध गर्नुभएको छ। हामी स्थानीयको पनि कुरा सुन्छौँ,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले भने जस्तै पुरानो पिल्लर खोज्ने र प्राविधिकको टोलीबाट समस्याको समाधान गर्ने पक्षमा हामी छौँ।’ धनगढीको फूलबारीमा रहेको ७४२ नम्बर मात्रै होइन भजनी नगरपालिकाको ७०७ र ७०८ सीमा स्तम्भमा पनि समस्या रहेको छ।
काठमाडाैं । नेपाल वायुसेवा निगमको दुई वटा वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण निकै विवादमा रहेर अन्ततः घोटाला गरेको ठहर भए…
काठमाडौं । पाँच नेपाली र चार विदेशी नागरिकले यो सिजनमा सगरमाथा आरोहण नै नगरी झुटो विवरण पेस गरेको फेला…
भद्रपुर । बलात्कार मुद्दाका फरार अभियुक्त आठ वर्षपछि पक्राउ परेका छन्। पुनरावेदन अदातल इलामले फैसला सुनाएका हल्दिबारी गाउँपालिकाका ७२…
यस्तो छ कलाकारहरुको होली (फोटो फिचरसहित )
काठमाडौं। फागुन शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने फागु अर्थात् होली पर्व बुधबार हिमाली एवं पहाडी जिल्लामा हर्षोल्लासका साथ मनाइँदैछ ।हिन्दूहरूको…
विष जस्ता नेपाली रक्सी: भोड्का पिउनुहुन्छ ? सावधान ! ब्रेन ड्यामेज हुनसक्छ !
काठमाडौं । तपाई मदिरा पिउनु हुन्छ ? पिउनु हुन्छ भने कुन…